प्रधानमन्त्री देउवालाई संसदको बहुमतले गर्‍यो विश्वास, पक्षमा १६५ मत - Global Online Khabar
आज: | Sun, 01, Aug, 2021
१गँलैचा कारखानाका बालबालिकाहरुलाई खाद्यान्न वितरण
२थप २,२३७ जनामा कोरोना संक्रमण, १८ जनाको मृत्यु
३५३ जिल्लाको कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गियो
४गोकर्णेश्वर नगपालिकाका बालबालिकाहरुलाई संस्थाद्धारा खाद्यान्न वितरण
५सिन्धुपाल्चोक बाढीपीडितलाई कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको २० लाख सहयोग
६विश्व रक्तदाता दिवसमा काठमाडौंको चावहिलमा रक्तदान
७विश्वभर घट्दै काेराेना संक्रमण, निको हुनेको संख्या बढ्दै
८जेठ २५ गतेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप
प्रधानमन्त्री देउवालाई संसदको बहुमतले गर्‍यो विश्वास, पक्षमा १६५ मत
ग्लोबल अनलाईन खबर २४ पाठक संख्या July 18, 2021 मा प्रकाशित (१ हफ्ता अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधि सभाको बहुमतले विश्वास गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि बसेको पहिलो दिनको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले राखेको विश्वासको मत लिने प्रस्तावको पक्षमा बहुमत प्राप्त भएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा बसेको कूल २४९ मतमध्ये १६५ सांसदले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन् भने विपक्षमा ८३ र ‘नो भोट’ गर्नेमा १ मत खसेको छ ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेको छ भने नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले समेत विश्वासको मत दिएको छ ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत मागेका थिए । नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिएपनि हुनेमा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ४ दिनमै मत लिएका छन् । विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा देउवाले सबै दललाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बहुमत सांसदहरू सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।
देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिएसँगै सर्वाेच्च अदालतको फैसला सही ठहर भएको छ भने राष्ट्रपति भण्डारीले सुरुमै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु गलत निर्णय रहेको प्रमाणित भएको छ ।
विश्वासको मत पाएसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले अब आगामी निर्वाचनसम्मै सरकार चलाउन पाउने छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । चालू प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अब लगभग १७ महिना बाँकी रहेको छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा आवधिक निर्वाचन हुनेछ ।
विश्वासको मत माग्दै देउवालाई प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव राखेका थिए ।
विश्वासको मत माग्दै देउवाले के–के बोलेका थिए ?
प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात सम्मानीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापित भएको छ। आज सभाको आठौं अधिवेशन प्रारम्भ भईरहेको छ। म सबै भन्दा पहिले सबै माननीय सदस्यहरुलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। नेपाली जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलीदानले देशमा संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। ईतिहासको लामो कालखण्डमा लोकतन्त्रका लागि भएका राजनीतिक संघर्षमा बलीदान गर्ने सम्पूर्ण शहिदहरुलाई सम्मानपूर्वक स्मरण गर्दै हार्दिक श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछु। लोकतन्त्रको स्थापना र संरक्षणका लागि योगदान गर्नु हुने सबै नेपाली नागरिककाप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु।
पटक–पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण विगत केही समय देशमा राजनीतिक अन्यौल र अनिश्चितताको स्थिति रह्यो। नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त हुनु भएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री माननीय के.पी. शर्मा ओलीजीले धारा ७६ (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नलिई धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नु भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रकृया प्रारम्भ भयो। केही समयको राजनीतिक र संवैधानिक अभ्यास पश्चात म नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको छु। र मेरो नेतृत्वमा मन्त्री परिषद् गठन भएको छ। मलाई प्रधानमंन्त्रीमा नियुक्त हुन सहयोग र समर्थन गर्नु हुने राजनीतिक दलका नेताहरु, माननीय सदस्यहरु लगायत सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सरकारलाई भविष्यमा पनि निरन्तर सहयोग र समर्थन रहने विश्वास पनि लिएको छु।
अहिले मुलुक निकै जटिल अवस्थामा छ। विश्वव्यापी रुपले फैलिएको कोभिड–१९ को प्रकोपले हामी निकै प्रभावित भएका छौ। दैनिक रुपले संक्रमण बढी रहेको छ। मानिसहरुको मृत्यु भईरहेको छ। म कोभिड—१९ का कारण मृत्यु भएका सबैको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दछु। शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। अस्पतालमा उपचार गराईरहनु भएका सबैको शिघ्र स्वास्थलाभको कामना गर्दछु। कोभिड—१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि अहोरात्र खटेर काम गर्नु हुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली नागरिकलाई कोभिड—१९ को प्रकोपबाट जोगाउने यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। सरकारले कोभिड—१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि सबै उपायहरु अवलम्बन गर्नेछ भन्ने म प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु।
हामी याँहा उपस्थित सबै राजनीतिक दलहरुको प्रयत्नबाट नेपालको संविधान निर्माण भएको हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। यसको संरक्षण र सुदृढीकरण पनि हामी सबैको प्रयासबाट मात्र सम्भव छ। बहुदलिय व्यवस्थामा फरक–फरक राजनीतिक बिचार हुने तीनका बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने, स्वस्थ आलोचना प्रत्यालोचना हुने विषयहरु स्वाभाविक र राम्रा हुन। ती आवश्यक पनि छन। तथापी हाम्रा केहि साझा चुनौति, उद्देश्य र गन्तव्य छन। जस्का लागि हामीले सहकार्य र सहयात्रा गर्नु पर्छ। कोभिड—१९ हाम्रो तत्कालको चुनौति हो। गरीबी, वेरोजगारी, अशिक्षा जस्ता तमाम साझा समस्या छन। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान हाम्रा साझा विषय हुन। नेपालको संविधानको संरक्षण र यसको असल कार्यान्वयन हाम्रो साझा गन्तव्य हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमवाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नु हामी सबैको साझा उद्देश्य हो। यसका लागि हाम्रा बिचमा सहकार्य र सहयात्राको आवश्यकता छ।
हामी सबैसंग आ–आफ्ना अनुभवहरु छन। माननीयके.पी. शर्मा ओलीले विगत साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नु भएको छ। वहाले गर्नु भएका असल कामका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वहाको अनुभव हाम्रा लागि उपयोगी हुनेछ। विगतमा भएका राम्रा कामहरुलाई निरन्तरता दिदै कमी कमजोरी सुधार गर्दै लानु पर्नेछ। महत्वपूर्ण नयाँ कामहरु पनि गर्नुछ। देशमा सुशासन कायम गर्नुछ। यसका लागि सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष र सबै राजनीतिक दलहरु बिच निरन्तर सम्वाद, सहकार्य र सामुहिक प्रयत्न आवश्यक छ भन्ने मेरो मान्यता छ र यसका लागि म सदैव प्रयत्नशिल रहने छु। हामी राजनीतिक दलहरु एक अर्काका शत्रु होईनौ बरु हाम्रा साझा उदेश्य प्राप्तिका लागि सहयात्री हौ भन्ने भावनाका साथ काम गर्नु पर्दछ।
संसदीय लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि देशमा लामो त्याग तपस्या र बलीदानपूर्ण संघर्ष भएको हो। संसदलाई अधिकार सम्पन्न, जिवन्त र क्रियाशिल बनाउनु पर्दछ। सरकार संसदप्रति उत्तरदायी रहनु पर्दछ भने संसदले सरकारका सबै गतिविधिप्रति ध्यान दिई अनुगमन गर्नुपर्दछ। यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ। निरन्तरको राजनीतिक अन्यौल, अनिश्चितता र अस्थिरताले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर गर्दछ। तसर्थ अब हामी राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा हिड्न जरुरी छ।
म नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सम्मानित प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छु। सबै माननीय सदस्यहरुले मलाई विश्वासको मत दिनु हुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु।
चीनबाट आइपुग्यो थप आठ लाख डोज खोप
कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै फेरि लकडाउन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस
गँलैचा कारखानाका बालबालिकाहरुलाई खाद्यान्न वितरण
थप २,२३७ जनामा कोरोना संक्रमण, १८ जनाको मृत्यु
मलेशियाबाट नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले ल्यायो एकैपटक २४ नेपालीको शव
काठमाडौँ उपत्यकामा ६१५ जनामा संक्रमण पुष्टि
कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्दै, एकैदिन ३ हजार १ सय १४ संक्रमित, १६ को मृत्यु
बागमती प्रदेश माननीय छिरिङ दोर्जे लामाद्वारा खुल्ला व्यायमशालाको समुदघाटन
गोकर्णेश्वर ८ को इकाई सभापतिमा हिरेन्द्र लामाको दावि
एनआरएनए पोर्चुगलद्धारा पञ्जिकृत सदस्यहरुको नामावली सार्वजनिक
जनसम्पर्क समिति स्विडेनको आयोजनामा बृहत बनभोज कार्यक्रम
नेविसंघ क्षेत्रीय सभापति राजेश अधिकारीबाट गोकर्णेश्वर ८ को इकाई सभापतिमा दावि